sarrifka crypto Canadian Coinsquare kicisaa $ 30M - Blockchain News
sarrifka cryptocurrency Canadian Coinsquare ayaa soo sara kiciyey $30 milyan oo maal-sinaanta cusub.
maanta ku dhawaaqay, maalgelinta uu hogaaminayey adeegyada maaliyadeed shirkad Canaccord Genuity iyo “waxaa loo isticmaali doonaa in ay Kor qorshe caalami ah koritaanka…”
Qayb ka mid ah riix in ka mid noqon doona qorista sida ugu badan 100 shaqaalaha bilaha soo socda, la il in ay leeyihiin 200 shaqaalaha u shaqeeya is-dhaafsiga by quarter labaad ee sanadkan
“Waxaan orotonno, laakiin inaan orotonno Waxaana si xaq samayn. Waxaan dooneynaa in ay qaataan wadada jir-dugsiga sida IPO ay ku Stock Exchange Toronto,” Cole Diamond, CEO Coinsquare, sida laga soo xigtay.
Coinsquare ayaa sheegay in qorshaha ballaarinta ay sidoo kale waxaa ka mid ah maalgelinta ee macdanta cryptocurrency, Daah Qaybta Trading iyo Arbitrage ah iyo abuurista lacag “diiradda lagu maalgelin guud ahaan dhulka hanti digital” taas oo ah waxaa loogu yeedhi doonaa CoinCap Funds.
Post Previous:Sida loo abuuro Crypto Exchange
Post Next:Maxaa ku dhacay Exchange Binance iyo markii dalab ka bilaabaan
Laga yaabaa 11, 2018 at 6:34 AM